ANALAMANGA PARK : Hotokanana rahampitso, amin’ny endriny vaovao – Free News
mercredi, 8 décembre 2021 - 1:10
Ny Filoha Andry Rajoelina no hitokana an'Analamanga Park.
Accueil/Politika/ANALAMANGA PARK : Hotokanana rahampitso, amin’ny endriny vaovao
Fotodrafitrasa goavana sy manarapenitra ary hipetraka ho tsangambaton’ny ekipan’ny Faritra Analamanga ankehitriny no napetraka etsy Analamanga Park, ao amin’ny Kaominina Ambalavao, Distrikan’Atsimondrano. Vita tanteraka ny fanavaozavana ny toerana, ary hotokanana rahampitso izany. Lanonana izay hotarihin’ny Filohan’ny Repoblika Andry Rajoelina.
Lucien R. 15 octobre 2021
Efa an-taonany maro no tsy nisy nijery sy nanavao ny toeram-pitsangatsanganana sy fialana voly etsy Analamanga Park. Ny Ekipan’ny Faritra Analamanga ankehitriny, tarihin’ny Governora Hery Rasoamaromaka, kosa, no nanana ny finiavana sy nametraka fanamby ny hanavao tanteraka izany toerana izany. Amin’izao fotoana, vita tanteraka ny asa. Ary hotokanana rahampitso. Fotodrafitrasa sy zava-baovao maro no napetraka ao amin’ny Analamanga Park. Tafiditra ao anatin’izany ny Kianja filalaovam-baolina synthétique, ny kianja filalaovana kanetibe, basket, Volley, ary ny Dobo filomanosana ho an’ny lehibe sy ny ankizy. Ankoatra izay, misy ihany koa ny Bungalow sy ny trano chalet azo ipetrapetrahana tsara, mety ho an’ny fianakaviana. Manampy ireo ny fanajariana ireo hazo marobe eny an-toerana izay azo itsangatsangana tsara. Fehiny, niova endrika tanteraka i Analamanga Park.
Ho an’ny Malagasy rehetra tsy an-kanavaka
“Ankasitrahana azy indrindra fa ny Filoha mihitsy no ho avy itokana ity fotodrafitrasa vaovao ity amin’ny Sabotsy (naotin’ny fanoratana: rahampitso)”, hoy ny Governoran’Analamanga, Hery Rasoamaromaka omaly. Notsindrian’ity farany fa ho an’ny Malagasy rehetra tsy an-kanavaka ny toerana, ary raha ny eo anivon’ny Faritra Analamanga ankehitriny dia nametraka mihitsy fa ny fahavitan’i Analamanga Park no isan’ny tsangambato lehibe nanamarika ny nandalovana teo amin’izany toerana izany.
Ny eo anivon’ny Faritra ihany no fantatra fa hitantana ny toerana amin’izao fisokafana voalohany izao, araka ny fanazavana. Noho ny fahasahiranana taorian’ny fihibohana, hoy ny Governora, dia mbola sarotra ny hanomezana ny fitantanana ho an’ny tsy miankina satria manahirana ny mamaritra ny vola aloan’ny mpanjifa rehetra hiditra ao amin’ny Analamanga Park. “Raha atao mora dia maty antoka ny Fanjakana. Raha atao lafo dia maty ny mpandraharaha”, hoy izy. Na izany aza, efa ny tsy miankina no hisahana ny fampihodinana ireo toeram-pisakafoana rehetra ao Analamanga Park manomboka amin’ny fisokafany rahampitso.
Maherin’ny 2 miliara ariary ny tetibidin’ny asa fanarenana, raha ny fanazavana. Orinasa malagasy 24 no nanao azy, nangarahara ny nanaovana ny tolobidy rehetra, ary tena manaraka ny fenitra, hoy hatrany ny Governora nanamafy.
10 000ariary no vidim-pidirana ao Analamanga Park. Hosantarina mandritra ny fitokanana rahampitso izany. Ho fanomezana fahafaham-po ny Malagasy rehetra kosa anefa dia nampidinina ho 5 000ariary ny vidim-pidirana ny alahady izao. Fotoana izay hiarahana amin’ireo mpanakanto maro.
ANTOKO FREEDOM: Manohana ny tanora hisandratra eto amin’ny firenena
« MASQUES CHIRURGICAUX » : Misy manangona ireo efa niasa… ary miverina mivarotra izany indray
FISITRAHANA NY VAKSINY COVID-19: Azo atao ny misoratra anarana amin’ny Internet, ho asina QR Code ny karatra vaksiny
FARAN’NY HERINANDRO TAO TOAMASINA: Nanjakan’ny hain-trano, roa no namoy ny ainy